हामीलाई केही कब्जा गर्नु छैन :: भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
हामीलाई केही कब्जा गर्नु छैन :: भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तीनदिवसीय नेपाल भ्रमण सकेर नयाँ दिल्ली फर्किसक्नुभएको छ । २३ वर्षसम्म हुन नसकेको मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आउनुभएकी विदेशमन्त्री स्वराजले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूसंग भेटवार्ता गर्नुभयो । संयुक्त आयोगको बैठकले सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै मुद्दामा छलफल गर्दै २६ बुंदे सहमतिमा समेत हस्ताक्षर भयो । भारतीय राजनीतिका लोकप्रिय व्यक्तित्व एवम् केन्द्रीय सरकारमा धेरैपटक मन्त्री भइसक्नुभएको र लोकसभामा भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत भइसक्नुभएकी सुष्मा स्वराजसंग स्रोत ऋषि धमलाको कुराकानीका सङ्क्षिप्त अंशहरू:
० तपाईंको नेपाल भ्रमण कस्तो रह्यो ?
– मेरो नेपाल भ्रमण मैले सोचेभन्दा पनि एकदम सफल, फलदायी एवम् उपलब्धिमूलक रह्यो । यो भ्रमणबाट सन्तुष्टि भएर नयाँ दिल्ली फर्किंदै छु । दुवै पक्षको बीचमा भएको उच्च राजनीतिक छलफल र संयुक्त आयोगको बैठकलाई सफलताको रूपमा लिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
० भ्रमणको सफलताको आधार के हो ?
– यस्तो उच्चस्तरको भ्रमण र छलफल दुई देशबीच निरन्तर भइरहनुपर्छ । २३ वर्षपछि संयुक्त आयोगको बैठक बस्यो र यसले जुन किसिमको २६ बुदामा सहमति गरेको छ यो अर्को महत्वपूर्ण काम हो । यो भ्रमणलाई म धेरै कारणले सफल र उपलब्धिमूलक ठान्छु ।
० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी आइतबार नेपाल आउंदै हुनुहुन्छ, यो भ्रमण सफल बनाउन तपाईंको
भ्रमण कत्तिको उपयोगी भएको ठान्नुहुन्छ ?
– नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतमा सरकार बनिसकेपछि नेपाललाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौ। भारतमा यतिबेला संसद् चलिरहेको छ, र १४ अगष्टसम्म चलिरहन्छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिवसीय भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउदै हुनुहुन्छ । १७ वर्षदेखि भारतीय उच्च नेतृत्वको भ्रमण नेपालमा हुन सकिरहेको थिएन । १७ वर्षपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई सफल र उपलब्धिमूलक बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । भारत आफ्नो छिमेकीसंग कति निकटस्थ छ भन्ने कुरा पनि यसले प्रमाणित गर्छ । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा आर्थिक एजेन्डाले विशेष स्थान पाउनेछ । म आशावादी छु कि यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नया आयाम थप्नेछ ।
० तर, मोदीको भ्रमण नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्नेगरी हुन लागेको हो रे नि त ?
– मैले पनि यस्तो कुरा नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि सुनेकी थिएँ, र मिडियामा पनि पढें, मलाई एकदमै दुःख लाग्यो । तर, भारतलाई महात्मा गान्धीको भूमि पर्याप्त छ । हामीलाई कुनै पनि मित्रराष्ट्रको न त भूमि न त जलस्रोत नै कब्जा गर्नुछ । हामी त खालि नेपालको विकास चाहन्छौ । नेपाली जनता खुसी भएको हेर्न चाहन्छौ । भारतलाई पशुपतिनाथको देश, जानकी जन्मेको भूमि र बुद्ध जन्मेको राष्ट्र नेपालको कुनै पनि भूभाग कब्जा गर्नु पनि छैन र त्यस्तो सोच हामीमा न आएको छ न कहिल्यै आउ“छ । हामी त नेपालको प्रगति र उन्नति चाहन्छौ। त्यसैले म सबै तह र तप्काका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई भन्न चाहन्छु कि नेपाललाई हेर्ने हाम्रो नकारात्मक सोच छदै छैन, खालि सकारात्मक सोचले मात्रै हेर्न चाहन्छौ । त्यसैले नेपालको कुनै पनि भूमि भारतले हडप्ने छैन । त्यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालको जलस्रोतको कुरा गर्दा पनि भारत त्यसमा प्रस्ट छ नेपालमा ऊर्जाको विकास गरौ । ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालन गरौ“ र नेपाललाई बढी भएको बिजुली मात्रै हामी खरिद गर्न चाहन्छौ । र, सबै नेपालीको घरमा बत्ती बलोस् र यहा“का जनताले उपयोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै हामीलाई दिए हुन्छ । नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार नीति नै छैन ।
० तर, तपाईंले ऊर्जा सम्झौताका लागि पठाउनुभएको मस्यौदा त विवादमा पर्यो नि ?
– त्यस्तो विवाद गर्नुपर्ने कुरा मैले देखेको छैन, तर पनि दुवै पक्ष बसेर त्यसलाई टुग्याउने सहमति भएको छ । भारत र नेपाल सकारका ऊर्जामन्त्रीहरू बसेर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा सहमति भएको छ । यद्यपि यसमा भएका विवादका केही कुरा छन् भने छलफल गरेर पुनरावलोकन वा सच्याएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले ऊर्जा सम्झौता कस्तो गर्ने भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम अधिकार हो । त्यसलाई भारत जहिले पनि सम्मान गर्छ ।
० उसो भए तपाईंहरू नेपालको ऊर्जाशक्तिलाई एकलौटी रूपमा उपयोग गर्ने पक्षमा त हुनुहुन्न ?
– भारतको त्यस्तो सोच छदै छैन । त्यस्तो भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थिति थियो, उहाँहरुको बीचमा भएको भेटवार्तामा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा ठूला–ठूला हाइड्रोपावर बनून् त्यसमा भारतको सदैव सहयोग र समर्थन रहन्छ, त्यो नेपालको विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण काम हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो । नेपालको भारतसंग धेरै व्यापारघाटा रहेको छ । त्यो व्यापारघाटा कम गर्न नेपालमा ऊर्जा विकास हुनुपर्छ भन्नेमा भारत छ । नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र बढी भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ हो । नेपालसंग बढी भएको विद्युत् मात्रै किन्ने पक्षमा हामी छौ । तर, यहा चलेको हल्लाझैं भारत नेपालको जलविद्युत् कब्जा गर्ने पक्षमा छदै छैन । हामी त नेपालस“ग विकासका लागि साझेदारी गर्न चाहन्छौ । र, ऊर्जा विकास सम्झौता पनि दुई देशबीचकै सहमतिमै हुने हो । त्यसैले पहिला त नेपालको हित भारतले चाहेको छ ।
० दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी विवाद पनि वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– दुई देशबीचमा रहेको सीमासम्बन्धी विवादलाई पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले छलफल सुरु गरेका छौ । संयुक्त आयोगको बैठकमा यसबारेमा कुरा भइसकेको छ । त्यसका लागि प्राविधिक समिति गठन हुने भएको छ । हामीबीच सीमा निर्धारण र नामाकरणको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । बाँकी तपार्इंले सोध्न चाहेको कालापानी र सुस्ताको सीमाबारेमा पनि राजनीतिक तहको परामर्श रहनेछ । यो मुद्दा सुल्झाउन हामीले पराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्रलाई पनि हामी आग्रह गर्नेछौ र भारत–नेपाल सम्बन्धमा देखिएका सबै समस्याका मुद्दाहरूलाई समाधान गरेर जान हामी तयार छौ।
१४ श्रावण २०७१, बुधबार ०८:५४ मा प्रकाशित